INKXASO OMKHULU Laser KWIZIFUNDISWA ZOBUGCISA
Ukwenzela ukuqinisekisa inkonzo ngocoselelo kunye nemfezeko, kufuneka ogqibeleleyo pre-zentengiso kuphela, intengiso, yaye emva-intengiso ngeenkqubo, nathi ukuqhuba ulawulo ebanzi kule nkalo zilandelayo:
1. Wonke umntu emva kwenkonzo yokuthengisa ethengiswa kwe-laser yegolide uye wanesidanga sasekholejini okanye ngaphezulu, kwaye ngamnye emva kwenkonzo yentengiso uye wafumana uqeqesho lwangaphakathi kunye nokuphumelela kwenkqubo yethu yokuvavanya ubuchwephesha ngaphambi kokuba aqinisekiswe ukuba ayisebenzi.
Okwesithathu, indlela yokuziphatha yokuziphatha esemgangathweni
1. Inkampani isebenzise umgaqo wokuziphatha kunye neendlela zovavanyo zokuqinisekisa ukuba inkqubo yenkonzo ibekwe emgangathweni kunye neenkqubo zenkonzo kunye neenkonzo zilungelelaniswe ngokufanelekileyo. Umgangatho weenkonzo ezibangelwa yiyantlukwano yobuqu iyancitshiswa kwaye ithintelwe.
Okwesine, ulawulo lwejelo lolwazi olululo
1. Abathengi banokunxibelelana nathi ngeendlela ezahlukeneyo ezinjengomnxeba, ifeksi, ileta, i-imeyile, kunye nomyalezo wewebhusayithi.
Ukuze babakhonze ngcono bonke abasebenzisi, kwaye abasebenzisi nokutyala iimveliso izixhobo laser ekhuselekileyo nexhala-free, laser yegolide uya kunika abasebenzisi abane elungileyo inkonzo yasemva ukuthengiswa.
Kufuneka emva kwenkonzo ngoku!
Nceda ubonelele ngochungechunge loMatshini xa usithumela i-imeyile emva kwenkonzo!